Ny lesona tsara alaintsika Malagasy amin’ilay sarimihetsika Black Panther – Blaogin'i Voniary
Anisan’ireo sarimihetsika be mpankafy indrindra maneran-tany ity Black Panther ity, noho izy manome lanja ny mainty hoditra sy maneho firenena aty afrika mivoatra sy matanjaka.Tsy iresaka mikasika ny fanatontosana avo lenta an’iny sarimihetsika iny aho fa aleo anjaran’ny hafa iny fa ilay votoatin’ny tantara mihitsy no tiako ifampizarana aminareo. Eo ihany manko ilay fijery hoe natao hampiala voly ny sarimihetsika fa misy antom-pisiany ihany koa ny fampitana hafatra. Indro àry ny lesona tokony tovozin’ny Malagasy tao anatin’iny tantara iny araka ny fijeriko manokana.
1. Mandroso nefa mitazona ny fomban-drazany
Wakanda no firenena matanjaka sy mivoatra indrindra eran-tany. Nohon’ny fananany ny « vibranium », izay singa mahery vaika indrindra eto ambany masoandro, dia mampiasa teknolojia avo lenta izay tsy mbola misy manana akory ry zareo. Tsy vitan’izany fa mamoaka fitaovana sy zava-baovao hatrany izy ireo satria misy ivon-toeram-pikaroana izay raitra dia raitra tokoa. Manana perla vakana atao fehin-tanana ny olona tsirairay. Maro ny zava-bitan’io perla io raha tsy ilaza fotsiny fa fitaovam-pifandraisan-davitra izy ary afahana mahita ny sarivaingan’ilay olona miresaka. Afaka mampijanona haingana ny fahaverezan-dra ihany koa izy io raha sendra misy olona maratra.
Wakanda (Marvel Studio)
Na dia eo aza izany rehetra izany dia mandala fatratra ny fomban-drazany ry zareo Wakanday. Ny fitafy no ahitana taratra izany voalohany indrindra. Manaraka tanteraka ny fitafy nentin-drazana na ny kely na ny lehibe ary ao koa ireo mamorona didy akanjo vaovao fa saingy izay maka aingam-panahy avy amin’ireo fitafy nentin-drazana ihany. Singa manan-danja iray tsikaritro : mitafy lamba ry zareo.
Mitafy lamba ry zareo! (Marvel Studio)
Hoy aho anakam-po hoe tahatahaka izao izany ilay Antananarivon’i Lisy sy ireo mponiny raha atao an-tsarimihetsika (ao amin’ny boky Lisy mianjoria). Manaraka izany, manome hasiny ny fomban-drazany izy ireo. Santionany amin’izany ny fankatoavana mpanjaka iray izay taranak’ilay mpanjaka voalohany nahazo hery manokana tamin’ilay andriamanitra Bast maka endrika pantera. Ireo mpanjaka nifandimby no antsoin’izy ireo hoe « Black Panther » na Pantera mainty.
2. Manao izay asa tiany ny vehivavy
Toa efa nilaozana lavitra ilay Afrika sy Madagasikara hatrizay sy amin’izao izay manasokajy ny vehivavy ho « fanaka » sady mbola « malemy » indray !!!! Fa any Wakanda, ireo Dora Milaje, izay marihina fa vehivavy daholo no tafika manokan’ny mpanjaka, Dora Milaje. Fa any Wakanda, vehivavy ny lehiben’ny mpikaroka siantifika sy teknolojika, tsy iza fa i Shuri izay zandrivavin’ny mpanjaka. Any Wakanda, misy mpitsikilo vehivavy, Nakia, izay fofombadin’ny mpanjaka saingy tsy sodokan’izay hareny sy voninahiny fa manana ny foto-kevitra ijoroany tsara.
Ireo Dora Milaje, tafika manokan’ny mpanjaka (Marvelo studio)
Marina fa tsy hitovy velively ny lahy sy ny vavy satria efa nataon’ilay Andriamanitra ho samy hafa mba hifameno. Na eo aza izany dia zo fototra amin’ny maha-olombelona, na vavy izy na lahy, ny fahafahana misafidy izay asa atao araka ny talenta nomen’Andriamanitra. Mbola betsaka ny fomban-drazana izay manao tsinontsinona ny vehivavy eto amintsika raha tsy hilaza fotsiny ny tsy fanana zo handova. Anjaran’ny tsirairay ary ny mandinika sy mandray izay andraikitra tandrify azy.
Ny filohan’ny tafika sy i Nakia mpitsikilo (Marvel Studio)
Shuri, ilay mpikaroka mahay (Marvel Studio)
3. Mahaleo tena tanteraka ny firenena
Ekena fa niainga avy tamin’ny nofinofy sy rediredin’ny mpanoratra no nipoitra i Wakanda nefa « rehefa vitanao no manonofinofy zavatra iray dia vitanao ny manatanteraka azy ! » hoy Walt Disney. Ekena ihany koa fa niangaran’ilay nahary manokana io firenena io, noho ny fananany ilay « vibranium », ka lasa tany tondra-dronono sy tantely. Izany rehetra izany no nahatonga azy ireo mahavita tena sy tsy miandry fanampiana avy any ivelany na dia afrikanina aza. Izy ireo indray aza no manolo-tena hanampy ny firenen-kafa. Ary ambonin’izany rehetra izany sarotiny fatratra amin’ny fananany sy ny maha-izy azy izy ireo ka izay no mahatonga azy miafina mba tsy ho simban’izao tontolo izao. Izay mokon-doha miaro ny azy izay mihitsy no tiako tsindriana !
‘Tchalla, Mpanjakan’ny Wakanda sady Black Panther
Raha tsiahivina kely ny tantaran’i Madagasikarantsika dia efa betsaka ny zava-bitantsika sy haintsika talohan’ny nahatongavan’ny mpanjanaka. Efa nahay nandrafitra sambo raitra sy manara-penitra ny Vezo, efa nahavita tamboho mafy noho ny « béton » ny Merina ary raha zohina ny paikady nentin’Andrianampoinimerina nampiray ny Malagasy rehetra dia mitovy amin’ireny tetikadin’i Sun Tzu ireny. Ny olana dia nodontoina mba hanambany ny an’ny tena ary hanindrahindra ny avy any ivelany isika Malagasy saingy tsy mety tonga saina mihitsy.
Ary ianao, inona no lesona azonao notsoahina tao ? Mandra-piandry izay sarimihetsika Malagasy hanohina ny saina sy fo amam-panahintsika, mba zarao hoe !
black panther, fahaleovan-tena, fomban-drazana, sarimihetsika malagasy, tantara foronina, tantara malagasy, wakanda forever
4 commentaires sur “Ny lesona tsara alaintsika Malagasy amin’ilay sarimihetsika Black Panther”
jenioutside dit :
Mahafinaritra ahy ny blaogin’i Voary !
Mankasitraka anao manaraka e!
FALIZARA dit :
Mankasitraka amin’ny fifampizarana e! tena manentana ahy tokoa ity blaoginao ity ka mirary soa ho anao sy ny mpiara-dia aminao.
Misaotra indrindra e! Manasa anao ary hanaraka hatrany ny blaogy e!